" कञ्चनजंगा News " – Page 1485 – " सधैँ अटल "
आजको राशिफल: वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ ०५ गते आइतबार
No Comments on आजको राशिफल: वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ ०५ गते आइतबार
वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ ०५ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१९ मई १९ तारिख, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, अनुराधा नक्षत्र, बृश्चिक राशिको चन्द्रमा, परिघ योग, बालब र कौलव करण, आजको मूहुर्त : शुभविवाह, रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), द्रव्यप्रयोग वा लगानी, भोलिको मूहुर्त : अग्निवास(होमादि), चूडाकर्म(छेवर),
राहु काल : साँझ ०५:०५ देखि ०६:४७ सम्म, यमघण्ट : दिउँसो १२:०१ देखि ०१:४२ सम्म, गुलिक काल : दिउँसो ०३:२४ देखि ०५:०५ सम्म,
शुभ वारवेला : दिउँसो ०१:४२ देखि ०३:२४ सम्म, अमृत वारवेला : बिहान १०:२० देखि १२:०१ सम्म, लाभ वारवेला : बिहान ०८:३८ देखि १०:२० सम्म, भोलि कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा आग्नेय (दक्षिणपूर्व) र नैऋत्य (दक्षिणपश्चिम) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने अमिलोपिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । पञ्चाङ्गखण्ड समाप्त भएको छ, यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँअनुसार तिथि, नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ ।
संयन्त्रका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नेपाली कामदारको जापानजाने सपना अझै अनिश्चित
No Comments on संयन्त्रका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नेपाली कामदारको जापानजाने सपना अझै अनिश्चित
स्रोतका अनुसार सन् २०१९ भित्र कामदार जापान जान नपाउने निश्चितजस्तै भएको छ। कुन मोडालिटीमा कामदार पठाउने भन्ने विषय टुंग्याउन नसक्दा अझै ६ महिनाभन्दा अघि कामदार जापान जान सक्ने अवस्था न्यून छ। जापानले कुन संयन्त्रबाट कामदार लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका बनाउन सकेको छैन। संयन्त्रबारे जापान स्पष्ट हुन नसक्दा जापान रोजगारीमा अन्योलता छाएको हो। जापानले सन् २०१९ अप्रिलदेखि विदेशी कामदार लिने नीति अबलम्बन गरेको थियो तर पछिल्लो समय विदेशी कामदार कुन संयन्त्रबाट भित्र्याउने भन्ने टुंग्याउन सकेको छैन। जापानले परीक्षणको रूपमा फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार भित्र्याउन थालेको छ। भियतनाम र फिलिपिन्सको परीक्षण सफल भएपछि मात्र अन्य देशबाट कामदार लैजाने जापानको पछिल्लो रणनीति छ।
नेपाल र जापानबीच गत चैत ११ गते श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी समझदारी भएको थियो। समझदारीपश्चात दुई देश सम्मिलित उच्च प्राविधिक टोलीबीच बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जापान रोजगारसम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। जापानबाटै भाषा र सीपको परीक्षण हुने भनिए पनि नटुंगिएकाले केही समय ढिलाइ भएको उनको बुझाइ छ। ‘जापान रोजगारी ईपीएसजस्तै मोडेलमा अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘उताबाट टुंगेपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा जापान युनिट स्थापना हुन्छ। जापान रोजगारीका लागि जापानका धेरै निजी कम्पनीले सहजीकरण गर्न चासो व्यक्त गरेका छन्। भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणसँगै उनीहरूले रोजगारदाता र कामदारको म्याचिङ गराउन चाहे पनि जापान नै अन्योल हुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। जापानले भाषाका लागि जापान फाउन्डेसन, सीपका लागि जापान एसोसिएसन गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स नेटवर्क अर्गनाइजेसन फाउन्डेसन (आईएचएन)का अध्यक्ष यासिहारु कोमियामाले केही समयअघि नेपाल आएका बेला संयन्त्र निर्माण भइनसकेकाले तत्काल नेपालबाट कामदार जान नसक्ने बताएका थिए। भाषा परीक्षा लिन नेपालमा अझै कोही तयार नभएकाले जापान रोजगारी पर धकेलिएको उनको भनाइ थियो। जापानी रोजगारी चर्चासँगै देशभर लाखौं विद्यार्थीले भाषा अध्ययन गरिरहेका छन्। रोजगारी निश्चित नहुँदा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको जापानिज भाषा इनिस्च्यिुटले बताउन थालेका छन्। विश्वभाषा क्याम्पसका जापानिज तथा चाइनिज भाषा शिक्षक हरिहर कार्कीले शिक्षकको क्षमता थाहा पाएर मात्रै पढ्न भाषा इन्स्टिच्युट जानुपर्ने सुझाउँछन्। ‘होर्डिङ बोर्ड हेरेर मात्र पढ्न गइहाल्न हुँदैन’, उनले भने, ‘राम्रोसँग बुझेरमात्र इन्स्टिच्युट छनोट गर्नुपर्छ।’ अधिकतम तह पास गरेको शिक्षक छनोट गर्न उनले सुझाए। भाषामा निपुर्णता र सीपमा दक्षता भएकाले ढिलोेचाँडो अवसर पाउनेछन्।
शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजलको भाउ घट्यो
No Comments on शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजलको भाउ घट्यो
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोल,डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ। निगमले शुक्रबार राति १२बजेबाट लागुहुनेगरी तीन इन्धनको मुल्य घटनाएको हो।
नेपाल आयल निगमका निर्देशक एवं प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर २ रुपै‌याँ, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर १ रुपै‌याँ घटाइएको छ। हवाई इन्धन र एलपि ग्याँसको खुद्रा मूल्य यथावत राखिएको छ।
मूल्य घटेपछि प्रति लिटर पेट्रोल १०८.५०, डिजेल र मट्टीतेल ९७ कायम रहेको निगमले जनाएको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएको छ । शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो ।
अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ कायम भएको छ । आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट १६ मे २०१९ मा प्राप्त मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाइएको हो ।
आजको राशिफल: वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ ०४ गते सनिबार
No Comments on आजको राशिफल: वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ ०४ गते सनिबार
वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ ०४ गते सनिबार तदनुसार ई. सं. २०१९ मई १८ तारिख, जेष्ठ शुक्ल प्रतिपदा, भरिणी नक्षत्र, मेष राशिको चन्द्रमा, सौभाग्य योग, किंस्तुघ्न र बब करण, आजको चाडपर्व र उत्सव : ललितपुरमा मत्स्येन्द्रनाथ रथारोहण (बुंगद्यरथयतइगु), आजको मूहुर्त : अग्निवास(होमादि), भोलिको चाडपर्व र उत्सव : चन्द्रोदय, त्रिपुष्कर योग बिहान ०४ बजेर २४ मिनेटपछि, भोलिको मूहुर्त : शुभविवाह, रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा),
No Comments on मन्त्री हुनु त गोकुल जस्तो
कवच भनेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा जस्तो हुनुपर्छ । गलतै काम भइरहेका होऊन्, कुतर्कै गरेर ढ्याप्पै ढाकिदिने । आफ्ना व्यक्तिले बदमासी गरे विचरा निर्दोष । क्षतिपूर्ती पो दिनुपर्छ त’ भनिदिने । कुकर्मको आलोचना भयो भने अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रप शैलीमा ‘फेक न्युज’ भनिदियो, सक्किगो !
सेखी झार्ने रणनीतिको त के कुरा गराइभयो र ! चोरका हजार दाउ भन्ने उखानै माथ गर्न लागिसके उनले । स्वतन्त्र सञ्चारको मुखमा ताला ठोक्न एक से एक उपायहरु छन् उनीसँग । जाबो लोकतन्त्रवादीहरुको दिमाग कहाँ यत्तिको तेजिलो हुन्छ र ? उनले फुराइरहेका उपायहरु हेर्दा लाग्छ, उनको गुरु पक्कै कुनै महान् मण्डले नै हुनुपर्छ, जसले लोकतन्त्रका मर्ममाथि प्रहार गर्ने एक से एक कला सिकाएर उनलाई दीक्षित गराइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक सोच र लोकतान्त्रिक विचार भएका भए उनी पेशागत कर्म गरेकै आधारमा पत्रकारलाई कसरी जेल हाल्न सकिन्छ, देखेको लेख्ने, बोल्ने र देखाउने वातावरण कसरी धमिल्याउन सकिन्छ भनेर दिव्यज्ञान प्राप्त गर्न यसरी दिनरात पक्कै मरिहत्ते गर्ने थिएननन् होला ।
उनका गुरु अनि निरंकुश दिव्यज्ञानले वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण धमिल्याउन ताल–तालका उपाय सुझाइरहेका छन् । ध्यान मुद्रामा हुँदा उनको दिव्य ज्ञानले कहिले विज्ञापन ऐन देखाइदिन्छ, त कहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक देखाइदिन्छ । सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, अन्य के–के ऐनहरु अझै बाँकी नै छन् वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई डम्प गरेर सूचनाका स्वतन्त्र संवाहकहरुलाई ठिङ्गुर्याउन । ज्ञानेन्द्र शाहले समाचार कक्षमा टाटोपाटे पोशाकधारीलाई बन्दुकसहित पठाएर कसरी कलमको निबको मसी आफूअनुकूल चलाउने प्रयास गरेका थिए, बास्कोटा पनि पक्कै जानकार छन् । त्यो बेला पुलतीसडकतिर एक कोठामा साप्ताहिक पत्रिका पोको पारेर हिँड्थे उनी । उनको न्युज रुममा टाटोपाटे सेन्सरकर्ता पुगे या पुगेनन् । नपुगेका भए पनि त्यो बेला बन्दुकसँग कलमको भरमा जुधेर जितेकाहरुको संस्मरण त पक्कै पढेका नै होलान् !
धन्न, उनको गुरुले त्यत्तिसम्म सुझाव दिन भ्याएका छैनन् र मात्र । नत्र त उनी के चुप लागेर बस्थे र ! त्यो क्षण लाइफमै अनुभव गर्न नपाएका अहिलेका नयाँ पुस्तालाई हिजो माघ १९ को प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर पक्कै दिन्थे उनी । लोकतान्त्रिक मुलुकमा लेखेको, बोलेको र देखाएको आधारमा पत्रकारलाई जेलमा सडाउने अलौकिक योजना सल्लाहबिना एक्लै त पक्कै ल्याएका हैनन् नै होला ।
माओवादी र सेनाको अन्तिम लडाइँ स्थल, जहाँ होमस्टे सञ्चालन भयो
No Comments on माओवादी र सेनाको अन्तिम लडाइँ स्थल, जहाँ होमस्टे सञ्चालन भयो
कालिकोट : कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–७ पिलीसँगै माओवादी युद्धको लामो इतिहास समेटिन्छ ।
यही ऐतिहासिक ठाउँ अहिले यसरी फेरियो कि, यहाँका स्थानीयहरु बदलिँदो गाउँको मुहारदेखि दंग छन् । पिली त्यही ठाउँ हो, जहाँ तत्कालिन माओवादी युद्धको अन्तिम लडाइँ भएको थियो । सोही ठाउँमा पर्यटक भित्र्याउन अचेल सुन्दर होमस्टे सुरु भएको छ । कर्णाली सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन भएपछि गाउँलेहरु पर्यटक बोलाउँदै आम्दानी बढाउने धन्धामा छन् । युद्ध पर्यटकीय स्थलका रुपमा चिनिँदै आएको पिलीमा स्थानीय युवाहरुको सक्रियतामा कर्णाली सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन भएको हो ।
करिब १ सय ५ घरधुरी रहेको पिली गाउँका पाँच घरमा मात्रै होमस्टे सुरु गरिएको हो । सुरुमा नयाँ प्रयोगको रुपमा थोरै घरमा होमस्टे सुरु गरिएको गाउँलेहरु बताउँछन् । यद्यपि, गाउँको अर्गानिक उत्पादन, संस्कृति र युद्ध इतिहासलाई फैलाउने प्रभावकारी माध्यम होमस्टे बनेको उनीहरुको भनाइ छ । कर्णाली सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापन समितिका सचिव पुत्रबहादुर मल्ल भन्छन्, ‘होमस्टे सञ्चालन भएपछि गाउँको पहिचान नै बदलिएको छ ।’
२०६२ साल साउन २३ गते तत्कालिन बिद्रोही माओवादीले सडक निर्माणमा खटिएको नेपाली सेनाको अस्थायी क्याम्पमा आकर्मण गर्दा भिषण भिडन्त भएको थियो । जहाँ नेपाली सेनाका ६२ जना, माओवादीका २७ जना, एकजना स्थानीय ठेकेदार शक्ति मल्ल सहित ९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यही इतिहासलाई पर्यटनको माध्यमबाट समेट्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । खाँडाचक्र नगरपालिका र कर्णाली प्रदेश सरकारले माओवादी युद्धको अन्तिम भिडान्त भएको ठाँउ भन्दै युद्ध पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्न खोजेको बताइन्छ ।
हालका लागि पिलीमा स्थानीय पुत्रबहादर मल्ल, नरबहादुर कार्की, नरेन्द्रबहादुर मल्ल, हरिबहादुर मल्ल र कृष्णबहादुर मल्लको घरमा मात्रै होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ । हामेस्टेमा भएको आम्दानीको ५ प्रतिशत कर संस्थालाई र ३ प्रतिशत कर वडा कार्यालयलाई उनीहरुले बुझाउनु पर्नेछ । होमस्टे सञ्चालक नरबहादुर कार्कीले धेरैजसो आन्तरिक पर्यटक र कहिले बाह्य पर्यटक पनि आउने गरेको बताए ।
जसबाट आफूहरुले मासिक रुपमा ३० देखि ४० हजार आम्दानी गर्ने पनि उनले बताए । उनका अनुसार पिलीमा स्थानीय अर्गानिक उत्पादन, कोदोको ढिँडो, रोटी, फापरको लगर, सिस्नोको राब्लो, आल्लोको राब्लो, लोकल कुखुरा र खसी, मकैको ढिँडो लगायत परिकार पाइन्छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा कर्णाली होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुर्मराज शाहीले युद्ध पर्यटनका दृष्टिले पिली प्रचुर सम्भावनाले भरिएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाइने बताए ।
गौशालामा ५२ बिघा जग्गा अतिक्रमण
No Comments on गौशालामा ५२ बिघा जग्गा अतिक्रमण
महोत्तरी : महोत्तरीको गौशालामा ५२ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। गाई संरक्षणका लागि छुट्ट्याइएको खर्बौंको जग्गामा पक्की घर बनेका छन्। जग्गा कब्जा गरेर कम्तीमा ६ वटा गाउँ बसेका छन्। चरण क्षेत्र मासिएको छ।
१९८३ मा भारत विहार प्रान्तका दरभंगा महाराजले पन्ध्र सय गाई संरक्षण गर्न भनी दुई सय बिघा चरण क्षेत्र छुट्ट्याएर ‘निगौल गाई गौशाला’ स्थापना गरेका थिए। दरभंगा महराजले ब्रह्मदेव ठाकुरमार्फत गाईको व्यवस्थापन गरेका थिए। त्यसपछि उनले जग्गा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरे। सुरुमा गौशालाको व्यवस्थापन तत्कालीन बडाहाकिमले गर्थे। त्यसपछि अञ्चलाधीश हुँदै २०४७ सालमा सीडीओ मातहत आयो। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो गौशाला केही वर्षसम्म अलपत्र रह्यो। २०६७ जेठ १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले गौशालाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विकासको जिम्मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमार्फत गर्ने निर्णय ग¥यो।
गौशाला बडाहाकिम, अञ्चलाधीश र सीडीओ मातहत गएपछि जग्गा रेखदेख भएन,’ राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका पूर्वसञ्चालक रामचन्द्र सिंह कुश्वाहाले भने, ‘गौशालामा बजार लगाउन केही जग्गा बिटौरीमा दिइयो। त्यसपछि जग्गा अतिक्रमण हुन थाल्यो। जग्गामा बस्ती विकास भयो।’ २०२२ सालमा नापी भयो। त्यतिखेर गौशालाको जग्गामा बसेकाले लालपुर्जा बनाए। प्रशासनले ध्यानै दिएन।
२०६७ भदौमा गृह मन्त्रालयले गौशालाको चलअचल सम्पत्तिसहित १ सय ५७ बिघा जग्गा कृषि मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको पूर्वअध्यक्ष कुश्वाहाले बताए। तीमध्ये दुई कित्ता जग्गा सरकारको नाममा थियो। निगौल गाई गौशालाका निमित्त प्रमुख रामछविला रायका अनुसार एक सय ४८ बिघा १५ कठ्ठा २ धुरको लालपुर्जा छ। ‘त्यसमध्ये साढे चार बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ,’ उनले भने। स्थानीय बासिन्दा भने त्योभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताउँछन्।
निगौल गाई गौशालाका तत्कालीन म्यानेजर दीपनारायण राउतले १३ फागुण २०५९ बिरौटीका नाममा टुक्राटुक्रा जग्गा बाँडेका थिए। विभिन्न समयमा ८८ जना र ३२ जना गरी एक सय २० जनाले बिटौरीका नाममा लिएको जग्गा कब्जा गरी मनोमानी ढंगले पक्की मल ठड्याइएका छन्। नवराजपुरका रामेकवला साहले दुई पुस्तादेखि गौशालाको जग्गामा घर बनाएर बसिरहेको बताए। उनले नेताहरूकै कारण गौशाला अतिक्रमणमा परेको आरोप लगाए।
← Newer Posts 1 … 1,484 1,485 1,486 … 1,500 Older Posts →